MAFista स्पटलाइट: संहिता कोल्लर
Elena Fairley मा जुन 1, 2019 द्वारा लिखित।
संहिता कोल्लरले लगभग तीन बर्ष उनको एमएएफमा धेरै भूमिका खेलेकी छिन्। आधिकारिक रूपमा, उनी एक साझेदार सफलता प्रबन्धक र संचार व्यवस्थापक हुन, तर उनी पनि एक कथाकार, एक मोबाइल अनुप्रयोग सामग्री विकासकर्ता, एक समुदाय अधिवक्ता, नयाँ कार्यक्रमहरूको लागि रणनीतिकार, एक सल्लाहकार काउन्सिलका लागि एक सह-अध्यक्ष, र धेरै MAFistas को साथी । अब, नयाँ तरीकाले समुदायका सदस्यहरूको लागि वकालत गर्न सिक्न उनी कानूनको स्कूलमा छिन्। हामीले उनलाई उनको अन्त्य दिन अगाडि एमएएफमा ज्ञान प्रदान गर्न भन्यौं।
तपाइँ कसरी आफ्नो अनुभव MAF मा चित्रित गर्नुहुन्छ?
सबै भन्दा पहिले, मेरो MAF मा मेरो अनुभव वास्तव मा आकार अब एक समुदाय संग काम गर्ने बारे सोच्ने तरीका छ। म संस्थाको मूल्यहरु को लागी मूल रुपमा MAF को लागी आकर्षित भएको थिए: भेट्नुहोस्, निर्माण गर्नुहोस्, र सम्मान गर्नुहोस्। मेरो कार्यक्रमको टीममा हुँदा मेरो अनुभव, मैले ती मूल्यहरू पूरा भएको देखेको छु। मैले यो देखेको छु जो MAF भाँडामा लिन्छन्। मलाई लाग्छ कि हामी त्यस्तो मान्छेहरू राख्छौं जो साँचो समुदाय नेता हुन्। तपाईले देख्नुहुन्छ कि कामको अगाडि ती समुदायका नेताहरू हेर्न कति महत्वपूर्ण छ। कुन कुराले मेरो अनुभवलाई यति खास बनाएको छ कि कर्मचारीहरू समुदायसँग निर्माण गरेका सम्बन्धहरू र ती मानहरू लागू हुने तरीका देख्न। म यी मानहरू कानूनको स्कूलमा मसँग लिन चाहन्छु, जहाँ म अधिक शैक्षिक सेटि inमा छु, र समुदायले कहिलेकाँही टाढा महसुस गर्न सक्दछ।
तपाईंले कार्यमा MAF का मानहरू हेर्दै उल्लेख गर्नुभयो। के तपाईसँग यसको उदाहरण छ?
हाम्रो मानमा निर्मित चीज मध्ये एक विश्वास हो। हामीले आफ्नो समुदायको विश्वास कमाउनु पर्छ। दिमागमा आएको एउटा उदाहरण हो कि यी तीनवटा ब्लग पोष्टहरू जुन मैले MAF ग्राहकहरूको बारेमा लेखें: कोनी, बोनी, र रोजा। यी तीन व्यक्ति वास्तवमा आफ्नो कथा बताउन हिचकिचाइरहेका थिए। तर उनीहरूले एमएएफमा भरोसा राखेका थिए। बोनीको डायनासँग वित्तीय कोच थियो। कोनीको ग्राहक सफलता प्रबन्धक डोरिससँग विश्वास थियो। रोजाको साथ उनीसँग एमएएफको विश्वास ड्याका अनुदान कार्यक्रममार्फत निर्माण गरिएको थियो। यी केवल केही चित्रणहरू हुन् जुन MAF समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्दछ र अन्तरक्रिया गर्दछ। तपाईं कहिले पनि यो मान्न चाहनुहुन्न कि कोही पनि उनीहरूको कथा भन्न तयार छ। व्यक्तिहरूका कथाहरू जटिल छन् - ती उतार-चढावहरूले भरिएका छन्। व्यक्ति एक सही कहानी बताउन चाहन्छ जुन लचिलोपन र सिकेका पाठहरू देखाउँदछ। त्यो एक होइन जो सुपर फ्लफी हो। मैले फेला पारे कि त्यहाँ कसैको कहानी लेख्ने एउटा तरिका छ, र उनीहरूका सर्तहरूमा यो गर्नुहोस्।
तपाईलाई कुन कुरामा गर्व छ?
DACA अभियानमा समेत सानो भूमिका खेल्नु भनेको म धेरै गर्व गर्छु। यसले वास्तवमै म के गर्न चाहन्छु भनेर सोच्न बाध्य बनायो। यसले मलाई अर्को चरणको रूपमा कानून स्कूलको अनुसरण गर्न प्रेरित गर्यो। यस सानो टीमलाई वास्तवमै शिफ्ट गियरहरू देखीरहेको छ र यो ठुलो पहलको कार्यान्वयनको लागि राम्रो सँगै काम गर्दछ। यस समयमा, मैले MAF लाई वित्तीय सेवाहरू र अध्यागमनको चौराहेमा हुने भनेको के देखें। हामी अन्त्य बिन्दु वा अन्य मुद्दाहरूको गेटवे भएको अन्त्य गर्छौं। त्यो अवलोकन गर्दै र कसरी एमएएफले प्रारम्भिक छुटकारा पछि जारी गरिएका आदेशहरूको जवाफ दिन जारी राख्यो त्यसले मलाई फरक फरक दृष्टिकोण कसरी मिल्दछ भनेर सोच्न अनुमति दियो। त्यो ठूलो शिक्षा थियो। एमएएफले मलाई बिभिन्न संगठनहरू सँगै कसरी राम्रो काम गर्न सक्दछ भनेर हेर्नको लागि अनुमति दियो। यो केवल एक संगठन हुन सक्दैन। मैले देखे कि हाम्रो पार्टनरशिप मोडेल, DACA अभियान, र रेफरलहरूको लागि कानूनी सेवा संगठनहरूसँग साझेदारी गरेर प्रमाणित भयो।
म पनि कार्यक्रम टीमको एक हिस्सा भएकोमा गर्व छु। साझेदार संस्थाहरूसँग मैले निर्माण गरेको सम्बन्धको म कदर गर्छु। उनीहरूले कार्यक्रमलाई उनीहरूको अद्वितीय समुदायमा कसरी टेलर गरिरहेका छन् भनेर हेर्न साँच्चिकै विशेष छ। साझेदारहरू जस्तै समुदाय सुधारको लागि हार्लेम मण्डलीहरू (HCCI) जुन वास्तवमा यसको सामुदायिक संगठनको अर्थ के हो भनेर मूर्त रूप दिन्छ। र हामीले साझेदारी गर्ने प्रत्येक संगठन समुदायमा यति जोडिएको छ।
तिम्रो लागि अर्को के हो?
यो गिरावट, म कानून स्कूल जाँदैछु। केहि मैले महसुस गरे कि म यहाँ रमाईलो गर्छु मँ कुराकानी र लेखन गर्दैछु। बिभिन्न दर्शकहरुसँग कुराकानी गर्ने र जानकारी लिने र सम्मोहक कथा बताउने तरिकाहरू पत्ता लगाउने यो विचार। म त्यो स्किलसेटमा निर्माण गर्ने आशा गर्दछु। म यो कानुनी ज्ञानलाई अर्को टूलसेटको रूपमा प्रयोग गर्न चाहान्छु जसले कथाहरू भनिरहेर जारी राख्न सक्छ जुन समुदायको विस्तृत श्रृंखलालाई समर्थन र उन्नयन गर्दछ। दिनको अन्त्यमा कानुन भनेको वास्तवमै शक्तिशाली उपकरण हो कि कसलाई कथा सुनाइरहेको छ त्यसमा निर्भर गर्दै सही वा गलत तरीकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। म संचारको मायाको बारेमा जान्न चाहान्छु कि यो कामलाई अलि अखाडामा जारी राख्नुहोस्।
तपाइँ के याद गर्नुहुनेछ?
म एमएएफ स्टाफलाई कराउन चाहन्छु। कार्यक्रम टोली सर्वश्रेष्ठ टीम हो जुन मैले कहिल्यै काम गरेको छैन। हामीले हेर्ने तरीकाले कि हामीमा दृष्टिकोणको विविध सेटअप छ, र त्यो हामी कसरी टिमको रूपमा कुराकानीमा खेल्दछौं भनेर हेरेर। जब हामी दिमागमा तस्विर गर्दछौं, विभिन्न दृश्य पोइन्टहरू देखाउँदा वास्तवमै एक अद्वितीय तत्व थपिन्छ। यो त्यस्तो चीज हो जुन म आशा गर्दछु म कानून स्कूलमा जान जारी राख्छु। म स्टाफको पक्षमा समर्पण छुन्छु। तरीकाले सबैजनाले कसरी काम बुझ्छन्, र समुदायसँग कसरी आदरपूर्वक काम गर्ने।